U-Einstein: Isisombululo se-AI seSalesforce sinokuqhuba njani ukuThengisa kunye nokuSebenza kweNtengiso | Martech Zone
Amasebe ezentengiso ahlala enabasebenzi abancinci kwaye besebenza kakhulu-ixesha lokulinganisa ekuhambiseni idatha phakathi kweenkqubo, kuchonga amathuba, kunye nokuhambisa umxholo kunye namaphulo okwandisa ulwazi, ukubandakanyeka, ukufunyanwa, kunye nokugcinwa. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, ndibona iinkampani zisokola ukugcina xa kukho izisombululo zokwenyani phaya ezinokuthi zinciphise izibonelelo eziyimfuneko ukwandisa ukusebenza ngokubanzi.
Ubukrelekrele bokwenza into yenye yezo teknoloji- kwaye sele ibonakalisile ukubonelela ngexabiso lokwenyani kubathengisi njengoko sithetha. Isakhelo ngasinye sentengiso enkulu sinenjini yayo ye-AI. Ngolawulo lweSalesforce kolu shishino, abathengi beSalesforce kunye nabathengi beLifu kufuneka bajonge Einstein, Iqonga le-AI labathengisi. Ngelixa iinjini ezininzi ze-AI zifuna uphuhliso oluninzi, i-Salesforce Einstein yaphuhliswa ukuba isetyenziswe kunye neenkqubo ezincinci kunye nokudityaniswa kwintengiso ye-Salesforce kunye nentengiso yokuthengisa… nokuba yi-B2C okanye i-B2B.
Esona sizathu siphambili sokuba i-AI ibalasele kwezentengiso kunye nentengiso kukuba, ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, isusa ukuthanda icala kwangaphakathi kwamaqela ethu okuthengisa. Abathengisi bathambekele ekugxininiseni kwaye bahambe kwicala abalonwabe ngakumbi xa kufikwa kumba wophawu, unxibelelwano, kunye neendlela zokwenza. Sihlala sidibanisa idatha ukuxhasa ubungqina bokuba sizithembile kakhulu.
Isithembiso se-AI kukuba sinika uluvo olungakhethi cala, olusekwe kwinyani, kwaye enye iyaqhubeka ukuphucula ixesha elingaphezulu njengoko kuziswa idatha entsha. Ngelixa ndithembele emathunjini am, ndihlala ndichukumiseka ziziphumo eziveliswa yi-AI! Ekugqibeleni, ndiyakholelwa ukuba liyalikhulula ixesha lam, lindenza ukuba ndijolise kwizisombululo zoyilo ngoncedo lwedatha ekujoliswe kuyo kunye neziphumo.
Yintoni uSalesforce Einstein?
U-Einstein unokunceda iinkampani zenze izigqibo ngokukhawuleza, zenze abasebenzi bavelise ngakumbi, kwaye benze abathengi bonwabe ngakumbi besebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela (AI) kwiPlatifomu yabathengi ye-Salesforce 360. Ujongano lomsebenzisi lufuna inkqubo encinci kwaye isebenzisa ukufundwa komatshini ukuthatha idatha yezembali ukuqikelela okanye ukwandisa intengiso yexesha elizayo kunye neenzame zentengiso.
Zininzi iindlela zokwenza ubukrelekrele bokuzenzela, nazi izibonelelo eziphambili kunye neempawu zeSalesforce Einstein:
I-Salesforce Einstein: UkuFunda ngomatshini
Fumana uqikelelo ngakumbi malunga neshishini lakho kunye nabathengi.
Ukufunyanwa kuka-Einstein -Nyusa imveliso kwaye ufumane iipateni ezifanelekileyo kuyo yonke idatha yakho, nokuba ihlala eSalesforce okanye ngaphandle. Fumana ulwazi olulula lwe-AI kunye neengcebiso kwiingxaki ezinzima. Emva koko, thatha inyathelo kwiziphumo zakho ngaphandle kokushiya iSalesforce.
Umakhi woQikelelo lwe-Einstein - Ukuqikelela iziphumo zeshishini, ezinje nge-churn okanye ngexabiso lobomi. Yenza iimodeli ze-AI zesiko kuyo nayiphi na intsimi ye-Salesforce okanye into ngokucofa, hayi ikhowudi.
U-Einstein Isenzo esifanelekileyo -Thumela iingcebiso eziqinisekisiweyo kubasebenzi nakubathengi, kanye kwiiapps apho basebenza khona. Chaza iingcebiso, yenza amacebo ezenzo, wakhe iimodeli zokuxelwa kwangaphambili, ubonise iingcebiso, kwaye usebenze ngokuzenzekelayo.
I-Salesforce Einstein: Inkqubo yoLwimi lweNdalo
Sebenzisa i-NLP ukufumana iipateni zolwimi onokuzisebenzisa ukuphendula imibuzo, ukuphendula izicelo, kunye nokuchonga iincoko malunga negama lakho kwiwebhu yonke.
Ulwimi lwe-Einstein -Qonda indlela abavakalelwa ngayo abathengi, imibuzo ngokuzenzekelayo yokuhamba, kunye nokuhambahamba komsebenzi wakho. Yakha ukuqhubekeka kolwimi lwendalo kwiiapps zakho ukwahlulahlulahlulo zesizathu kunye novakalelo kumzimba wesicatshulwa, nokuba loluphi ulwimi.
Iibhola zika-Einstein -Yakha ngokulula, uqeqeshe, kwaye uthumele i-bots yesiko kumajelo edijithali aqhagamshelwe kwidatha yakho yeCRM. Ukuphucula iinkqubo zeshishini, ukuxhobisa abasebenzi bakho, kunye nokonwabisa abathengi bakho.
I-Salesforce Einstein: Umbono wekhompyutha
Umbono wekhompyuter ubandakanya ukubonwa kwepateni ebonakalayo kunye nokuqhubekeka kwedatha ukulandela umkhondo weemveliso zakho kunye nophawu, uqaphele umbhalo kwimifanekiso, nokunye.
Umbono ka-Einstein -Bona yonke incoko malunga negama lakho kwimidiya yoluntu nangaphaya. Sebenzisa ukuqonda okrelekrele kwemifanekiso kwiiapps zakho ngokuqeqesha iimodeli ezinzulu zokuqonda uphawu lwakho, iimveliso kunye nokunye.
I-Salesforce Einstein: Ukwamkelwa kweNtetho ngokuzenzekelayo
Ukuqondwa kwentetho ngokuzenzekelayo kuguqulela ulwimi oluthethwayo kwisicatshulwa. Kwaye u-Einstein uthatha inyathelo eliya phambili, ngokubeka loo mbhalo kwimeko yeshishini lakho.
Ilizwi likaEinstein -Fumana izishwankathelo zemihla ngemihla, wenze uhlaziyo, kwaye uqhube iideshibhodi ngokuthetha ngokulula ku-Einstein Voice Assistant. Kwaye, yenza kwaye usungule isiko lakho, abancedisi belizwi elinophawu nge-Einstein Voice Bots.
Ndwendwela indawo yakwaSalesforce ye-Einstein ngolwazi olongezelelekileyo malunga nemveliso, ubukrelekrele bokuzenzela, uphando lwe-AI, amatyala okuSebenzisa, kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo.
Qiniseka ukuba uqhagamshelana ne- Ukubonisana nabathengisi kunye nokuphumeza inkampani, Highbridge, kwaye sinokukunceda ekuthumeleni nasekuhlanganiseni nasiphi na kwezi ndlela.
tags: kukubhadla okungeyonyaniumbono wekhompyuthaeinsteineinstein nlpumbono we-einsteinilizwi einsteinUhlalutyo lomfanekisoUkulungiswa kolwimi lwendaloukuthengisaUmthengisi u-Einsteinuqikelelo lwabathengisiuqikelelo lwabasebenziyintoni intengiso einstein
I-squarespace: Ndakhe iwebhusayithi ye-Spa eneVenkile ekwi-Intanethi kunye nokuSeta ngoSuku olunye